Topnepalnews.com | ऐतिहासिक झिल्टुङ गाउँ
Posted on: February 26, 2019 | views: 7336
0 नारायण नेपाल (पिपलबोटे कान्छो)
वर्तमान नुवाकोट जिल्लाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित एक प्राचीन गाउँ वस्तीको नाम हो झिल्टुङ । तल उत्तर पश्चिम त्रिशुली नदिको किनारादेखि दक्षिणमा कोल्पुखोला र पर्वमा चिम्टेश्वरको टापुसम्म झिल्टुङले छोएको छ ।
झिल्टुङ गाउँको नामाकरणको सन्दर्भमा विभिन्न किम्वदन्ती रहि आएको पाईन्छ । डाडापाखामा झिंगटीले घर छाएको गाउँ भएकोले झिल्टुङ गाउँ भनिएको हुन सक्ने अनुमान बुढापाकाको छ । प्राचिन कविला युगमा गणप्रथा थियो । सुन्दर,झिक्ले, ठाटिलो पाराले देखिने गणनायीका भएकाले झिल्केश्वरी देविकी रुपमा हाल सम्म पुजा आजा भएको पाईन्छ । उनै देवीको विर्ता जग्गा रुपमा रहेको क्षेत्रलाई झिल्टुङ भनिएको हुनसक्छ ।
ज्यादै दुब्ला पातला मान्छेहरु धेरै भएकाले झिल्टुङ भनिएको हुुन सक्ने पनि केहीको अनुमान छ । झिलिक्क टल्कने टलकदार पत्थर अभ्रख, सिल्कन पाईने स्थान समेत प्रयाप्त भएकाले समेत यस ठाँउलाई झिल्केश्वर भनिने त्यहीबाट झिल्टुङ नाम हुन गएको पनि केही बुढापाकाहरुको भनाई छ ।
मालिकाथानदेखी ठुलोखोला त्रिशुली नदिको दक्षिणतर्फ र कोल्पुखोलाको उत्तर तर्फका बस्तीलाई झिल्टुङ गाउँ भन्ने गरिन्छ । जुन नेपाल थरका ब्राहमणहरुको एक आदीम बस्ती मानिन्छ । गाउँ पञ्चायतको अवधारणासंगै झिल्टुङवेशीलाई रातमाटे र गाउँलाई दुईपिपल भन्न थालियो । ३३.९२ वर्ग कि.मी क्षेत्रफल यसमा पर्दछ । समुन्द्री सतहबाट यो क्षेत्र ४२० मिटर देखी २०७५ मिटर सम्मको उचाईमा अवस्थित छ । १६०१ घरधुरी रहिआएको यो क्षेत्रमा ८७१५ जना जनसख्याको बसोबास गर्दै आएका छन् ।
झिल्टुङ क्षेत्रको झिल्केश्वरी, कामरु र चिम्टेश्वर क्षेत्रको धार्मिक स्थलहरुलाई पौराणिक धर्म ग्रन्थको आधारमा महत्वपूर्णस्थान मानिन्छ । यसका अलावा ऐतिहासिक पक्षबाट हेर्दै झिल्टुङकोट, अर्चलकोट, मालिका, चुरेशाही धामीरुम्टो, झिल्केश्वरी पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले चिम्टेश्वर क्षेत्रमा निर्माण गरेको बङकर यस क्षेत्रमा नै अवस्थित छ ।
नेपाल थरका ब्राह्मणहरुको एउटा प्राचिन वस्तीको रुपमा यो ठाउँ रहेको छ । वि.सं. १३८४ मा खस राजा आदित्य मल्ल नुवाकोट लड्न आएका थिए । उनले कब्जा गरी बसेका थिए भन्ने इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ । खस आर्यहरुको पश्चिमबाट पूर्व तिरको बस्ती विस्तारको क्रममा विस्तारित (अवधी गरेको भन्ने इतिहासकारहरुको दाबी छ) ।
सिञ्जाली खस मल्ल राजाका पुरोहितका रुपमा रहेका उपाध्याय पण्डितलाई दुल्लु राज्यका राजाले दैलेखको नेपा भन्ने स्थानमा बिर्ता दिएको र नेपामा बिर्ता पाउनेहरु नेपाल जात भएको तथ्य पाइन्छ । (कौसीकाजी सन्तती, पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री)
ऐतिहासिक तथ्य अनुसार भाष्कर पण्डितका तिन भाई छोरा मध्येका कान्छा छोरा धैवुपाध्य नेपालले खस सम्राट आदित्य मल्ल देवबाट झिलतुङ विर्ता प्राप्त गरेको र बाग्मती प्रदेशमा उनै धैवुका सन्तानको ब्यापक रहेका छन । देशभर फैलिएका नेपालहरुको उद्गम थलो यही रहेको मानिन्छ ।
संस्कृतमा निप आलयबाट नेपालय बनेको हो । निप भनेको पहाडफेदी र आलय भनेको वासस्थान हो । यसर्थ हिमाल पहाडको फेदीमा बस्ने ब्राह्मणहरु नेपाल भनिएको हुनसक्ने देखिन्छ । यो क्षेत्र नेपालहरुको प्राचिन भूमि भएको तथ्य प्रशस्त पाइन्छ । बल्भ उपाध्यायले आफ्नो सृजना विस १९४८ मा (नुवाकोटेली साहित्यको इतिहास श्रीहरी फुयाँल) उल्लेख गरेका छन् । हेरौँ एक अंश ः
श्री नेपाल काठमाडौँ त्रिशुली बीच नुवाकोट तीनकोशमा
जुन पश्चिम पट्टी देख्नु नगीचै छ, बुधसिंघाट सामान्य त्यहाँ ।
हाथोक गाउँ झिल्टुङ तखत अति सफा वेशी कास्टार जहाँ
श्री भिसिनवाद नेरा सकल परिवार जनलिइ बस्याको हुँ त्याहाँ ।।
यतिबेला झिल्टुङको माथिल्लो क्षेत्र अचर्ले तल्लोवेशी, भालुखोला नेपालटारलाई विशेष महत्वको उर्वर जमिन मानेर भागवण्डा गरेको पाइन्छ । हालसम्म बुढापाकाहरुले भन्ने गरेको जनश्रुतीमा आधारित श्वलोकले तिनै पण्डितको भाई छोराहरुको भागवण्डामा आज झिल्टुङ खण्ड खण्ड पारिएको प्रष्ट हुन्छ ।
अचर्ले बारी तितेपातीघारी,
बेसी दाहाल टारी नेपालटारी ।
भालुखोला बारी र पारी दाहाल भान्जालाई पूर्णसारी
कुन्तु र कुन्तुलाई आधा–आधा पूर्णसारी । ।
यसरी हालको जिलिङ्ग, रातमाटे र दुईपिपलको क्षेत्रमा भएको जमिनको भागवण्डा र नेपालहरुको भान्जा भान्जी भन्दै एक अंश दिएर दाहाल वस्ती बसालेको तथ्य इतिहासमा पाइन्छ । आफ्नो सन्ततीलाई अंश र वंशको जानकारीका श्लोकको लयमा सृजना गरी छाड्नेहरुले इतिहासको केही तथ्य पक्कै हामीलाई दिएका छन् । त्यस्तै अलिखित तथ्य जनश्रुतीमा रहेको छ श्लोकहरुले ।
राजधानी नजिकै भएपनि आफ्नै मौलिकतामा बाँचेको छ झिल्टुङ गाँउ । पहाडी जीवन, निबन्ध र कुन्जिनी खण्डकाव्य लक्ष्मिप्रसाद देवकोटाले झिल्टुङको समाज र प्रकृती नियालेर मन्थन गरेका थिए । साँच्चै महाकवी देवकोटाको झिल्टुङको भावना यसरी दर्शाएका छन् ।
यो घाँसको डोको भरी जानु छ पिपलघारी
सपना वारी पारी स्वर्गको सानो फुलबारी ।
ढस्वर्ग छैन टाढा अब पहाडको टाकुरामा
कलेजी रङ हरियो भो मनको अंकुरामा ।।
विसं २००२ सालमा प्रकाशित कुञ्जिनि खण्डकाव्य देवकोटाले उतिबेला एकै रातमा लेखेका थिए भनिछ । जतिबेला देवकोटालाई पागल भन्दै राँची पु¥याएर फिर्ता ल्याएपछि झिल्टुङको धामी झाँक्री लगाउँदा ठीक होला की भन्दै परिवारले झिल्टुङको डाँडामा पु-याएका थिए समेत भन्ने गरिन्छ । त्यो बेला कार्गीलको युद्धमा नेपाली युवाहरुको बलिदान, यता उसको परिवार र मायालुको पीडामा आक्रान्त गाउँले जीवनको सचित्र काव्य व्याख्या देवकोटाले कुञ्जिनीमा गरेका छन् । मान्छे र समाजको बिम्व मात्र होइन देवकोटाले प्रकृतीप्रेम र प्रकृति पूजा पनि उत्तिकै गरेका छन । कुञ्जिनिमा झिल्टुङलाई सम्झेर हेरौ उनका पक्ती :
त्रिशुली माथि खंगारे भीर झिल्टुङको पहाडको यो छटामा
त्रिकोण परि झरेको पहाड कहानीले लैजाने यो छटामा ।
कोल्पु नदी त्रिशुली साथ भेट गर्ने गहिरो खाडीमा
आप लिच्ची बँगैचा बारी नाङो अग्लो पूर्वको यो इटीमा ।।
देवकोटाले औधी मनपराएको एउटा पहाडी गाउँलाई साहित्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने जमर्काे हाल देवकोटा सहित्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष साहित्यीक भ्रमण, कविता वाचन कार्यक्रम, साहित्य सम्मान गर्दै आइरहेको छ । झिल्टुङको दृश्यावलोकनले मोहित भएका साहित्य यात्री कवि कृष्णदेव रिमालले मनको एक भुल्कोलाई काव्य सृजनामा यसरी पोखाएका थिए । हेरौ उनको शब्दर्सजना :
त्रिशुली नदि घुमेर बग्ने झिलुङ गाउँछ
कुञ्जिनी सित गोरेले प्रित यही ठाउँला लाउँछ ।
हिजोका गोरे कार्गील जान्थे आजको कतार
विरानो भयो झिल्टुङ कठै लौ माया नमार ।।
आज समय बदलिएको छ । सामाजिक व्यवस्था फेरिएको छ । समाजमा सामाजिक उत्पीडन र विभेदका सुत्रहरु नयाँ–नयाँ ल्याएको छ । जनताको जीवन दैनिकी र दुःख उस्तै छ तर झिल्टुङ उस्तै प्रकृति र समाजको पछौटेपनमा बाँचिरहेको छ । जनमनका भावना जस्तै यो मनमा उठेका सृजनालाई शब्दमालामा मैले उनेको थिएँ ।
हिजोका मदन लासामा जान्थे आजको अरबमा
विचरी मुना एक रात सुत्छे एक सय डलरमा ।।
मुना र मदन परदेश गाको आजको कहानी
देवकोटा छैनन् कसले लेख्ला यिनका जीवनी ।।
झिल्टुङ एक प्राचीन ऐतिहासिक गाउँ हो । ऐतिहासीक अध्यनको स्थल हो । झिल्टुङ ग्रामीण साहित्य यात्राको केन्द्र हो । ग्रामीण साहित्य पर्यटनको उदाउदो केन्द्र हो । यसको यी सबै पक्षलाई बचाएर अगाडि बढाउन सके पक्कै पनि यहाँको पहिचान भेटिने छैन ऐतिहासिकता झल्किरहने छ । आजको हाम्रो अठोट पनि यही हो ।
चुरेशाइको विशाल पर्वत लेक छ उच्च स्तर
झिल्टुङ वेशी त्रिशुली तिरमा सुस्ताउछीन विस्तार ।।
कोल्पु वेशीवन र पाखा मयुर कालिज नाचेको
उतर हेर्दा हिमशैल्य छ मधुर स्वरमा हाँसोको ।।
देवकोटाले समकालिन समाजमा लाहुरे कार्गीेलको युद्धमा सामेल नेपाली युवाका भावुक प्रेमिकाको कहानी समाज भित्र झिल्टुङको पाखा परिवेशमा कोल्पु खड्गछाप त्रिशुली नदी लगायतको प्राकृतिकसँगै गोरे भूजेल जो देवकोटाको लागी मामाससुरालिले राख्वाली राखेका थिए । उनैलाई बिम्ब बनाउँदै समाज, युद्धको कहानिको प्रतिविम्वन गरेका थिए । कुन्जीनी खण्डकाव्यमा आज देवकोटालाई सम्झदै गर्दा कुञ्जिनी लेखिएको ७० वर्षपछि समाजको विम्व र आजको कुञ्जिनी को यथार्त यस्तो छ । हेरौँ एक अंश, आजको कुञ्जिनी ः
गोरे – प्रेमका खानी हे मेरा साथी लौ माया नमार
हिजोका गोरे कार्गील जान्थे आजका कतार ।।
पसिना बेची धन कमाई ल्याउला परदेशी ठाउँमा
मै मरे भने वाकसमा आउला प्रियको गाउँमा ।।
कुन्जीनी – के भन्या त्यस्तो हे मेरा प्राण साइतको बेलामा
घास र पात जहान बच्चा जाने छु मेलामा ।।
हजुर परदेश धन कमाई ल्याउनु म घर धानौला
सुदिन आउला यो जुनी हामी हाँसेर बाँचौली,
माया पिरति गासौँला ।
आज हाम्रो सामु अनेकौ चुनौति छ । पुजिवादले ल्याएको बजारबाद र उपभोक्ताबादी संस्कृती र पश्चिमा सभ्याताको अतिक्रमणले आक्रान्त बनाएको छ । हाम्रो समाज के हामी त्यो प्रचिन गाँउलाई एक समुन्नत आधुनिक ग्रामिण समाजको रुपमा मौलिकता बचाउन सक्छौ त ? एक नया अभियानको थालनी जरुरी छ । त्यो सुरु गर्न ढिलाई भइसकेको छ ।